TCO ambany (vidin'ny fananana feno) ary fampiasana ny angovo - Tapaho ny ankamaroan'ny vidin'ny fandefasana anao ary ampidino ny habetsaky ny angovo ampiasaina amin'ny teknolojia mahomby kokoa an'ny Streaming Global. Afaka manatratra an'io ny sehatrao amin'ny alàlan'ny fampiasana loharanom-pahalalana kely kokoa noho ny fomba fanaterana mahazatra. Ny mpijery dia mila tetezamita tsy misy tohiny rehefa mifamadika izay fitaovana hitany. Tian'izy ireo ny afaka mifanerasera amin'ny mpijery hafa amin'ny sehatra sosialy. Tian'izy ireo ho fantatra fa misy olon-kafa tsy mahazo tombony amin'ny filokana. Ny fomba fanaterana streaming mahazatra dia efa nilaozan'ny toetr'andro ary tsy afaka mamaly izany fangatahana izany - mandraka androany.
fampitana injeniera fampitana Engineering fandraisana anjara Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Litra Matthews OTT Telo sy zana-tsipìka Storage Video injeniera 2020-05-15
Previous: Manam-pahaizana momba ny famokarana - Haavo fidirana
Next: Ny rafitra fakan-tsarimihetsika vaovao an'ny B & H dia maka sary an-tsary